Sida laga soo xigtay Bloomerg waxaa jiri doona ugu yaraan saddex MacBooks cusub ah Nofeembar 10 | Waxaan ka socdaa mac
Waqtigaan la joogo, waa inaad ogaataa in wararka xanta ah ee ku saabsan dhacdo cusub oo Apple ah bishii Nofeembar la xaqiijiyay. Waxay ahayd Apple lafteeda oo ku dhawaaqday in maalinta xigta ee bishaan aan lahaan doonno dhacdo cusub oo ay aad uga badan tahay inay soo bandhigto Mac-yada cusub Apple Silicon. Waxay ku bilaabaan maalmo yar warar cusub oo ku saabsan maxay dhab ahaan Apple bari doontaa. Bloomerg waxay leedahay uguyaraan seddex MacBooks cusub ayaa lasoo bandhigi doonaa.
Saddex MacBook oo cusub oo leh Apple Silicon: 13-inch Air, 13-inch iyo 16-inch MacBook Pro.
In badan ayaa lagu xamanayay dhacdadii Nofeembar ee Apple ay ahayd inay qabato. Dhexdeeda, moodooyinka cusub ee Mac ee leh Chip-ka cusub ee ay si gaar ah shirkadda u soo saartay ayaa la soo bandhigi doonaa. In sidan waan ilaawi karnaa jiritaanka processor-yada Intel ee Macs, Taasi horey ayey u dhaaftay biyo, inkasta oo hadda ay tahay xaqiiqda, la taaban karo. Si kastaba ha noqotee, suurtagalnimada inaan arki doonno Apple Silicon oo shaqeyneysa bisha Nofeembar waa wax ka badan xanta.
Xusuusnow in Tim Cook uu horey u shaaciyey in dhamaadka sanadkan, ay shirkaddu bilaabi doonto si ay ugu qaybiyaan kombuyuutarradooda hawl-wadeenadooda. Isla waqtigaas, waxaa jiray hadal ku saabsan suurtagalnimada in aan arki doonno iMac oo ah moodelkii ugu horreeyay ee leh Apple Silicon. Warkan lama diidin. Bloomerg ayaa ku warramaysa in illaa saddex MacBooks cusub la arki doono, iyada oo aan meesha laga saarin wax kale.
Moodooyinka cusub ayaa noqonaya 13-inch oo ah MacBook Air iyo 13-inch iyo 16-inch MacBook Pros. Kuma lug lahaan doonaan dib u habeyn qaabeynta banaanka, laakiin waxay la imaan doonaan processor-ka cusub ee balan qaadaya inuu noolaado batteri dheer (iyadoo sifiican loogu xakameynayo iyada oo loo marayo softiweerka) oo ay la socdaan kuleyl yar iyo dabcan, hagaajinta waxqabadka.
In kasta oo aysan meesha ka saareynin inaan ku aragno Apple Silicon dusha desktop Mac, waa run taasi sheegay inay qaadanayso waqti dheer in la arko. Sida loogu talagalay iMac, waxay u imaan doontaa gabi ahaanba dib u habeyn. Waxaan sidoo kale yeelan doonnaa Mac Pro cusub oo sida muuqata kala badh ka mid ah midka hadda jira.
Hal usbuuc ayaa hadhay. Waxba ma ahan. Waxaan dhawaan arki doonaa cidda saxda ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Xanta » Sida laga soo xigtay Bloomerg waxaa jiri doona ugu yaraan saddex MacBooks cusub ah Nofeembar 10
Xaqiiqda cajiibka ah ee lagu kordhiyay websaydhka dhacdada Nofeembar